I-Wordpress: Iplagi yokudityaniswa kweSMS | Martech Zone
I-WordPress: Iplagi yokudityaniswa kweSMS
NgoMgqibelo, Septemba 6, 2008 NgeCawa, uDisemba 14, 2014 Douglas Karr
Mhlawumbi uqaphele ukuba bendithule kule veki iphelileyo. Ayiveli kukusilela komsebenzi, bendinayo kakhulu iveki exakekileyo!
Enye yeeprojekthi endikhe ndasebenza kule veki ibe yiPlagi yeWordPress evumela ngokuthe ngqo i-SMS ukudityaniswa kunye Imfono yokuxhuma. Iplagi yomelele kakhulu, zombini zombini ujongano lolawulo kunye nembonakalo yombhali. Ujongano lomlawuli likuvumela ukuba ulawule amanqaku okudityaniswa. I-interface yombhali ikuvumela ukuba ungeze ababhalisile kwaye uthumele imiyalezo kubabhalisi bakho beklabhu yokubhaliweyo.
Isinxibelelanisi soLawulo esiShukumayo:
Ukufikelela kwinqanaba lomlawuli kuphela
Bhalisa kwizimvo (zomnini webhlog). Zicoca ngokuzenzekelayo I-Akismet etyunjiweyo yogaxekile!
Izilumkiso zeposi zebhlog (ukwazisa ababhalisile bakho xa iposti ipapashiwe, iyahambelana neWordPress 2.6.1+)
Ifom yokongeza umrhumo ngesandla.
Fumana inani lababhalisi.
Isinxibelelanisi soMnxibelelanisi weSelfowni:
Inqanaba lombhali okanye ukufikelela okuphezulu
Thumela umyalezo osasazwa kubabhalisi bakho
Nciphisa i-URL (usebenzisa is.gd) ofuna ukuyifaka kumyalezo obhaliweyo
Yongeza ngesandla umrhumi.
Imfono yokuxhuma Inamandla API kwaye bendisebenza noAdam apho bobabini bayilungisa kakuhle iplagi kunye nokuphuhlisa ukudityaniswa okukhulu. WordPress ikhule kancinci kancinci kulo nyaka uphelileyo kwaye isetyenziselwa inani lezinto ezisetyenziswayo, kubandakanya i-ecommerce, izaziso zenkxaso yabathengi, ulawulo lomnyhadala, njl. njl.
Siza kuyivavanya kwibhlog yam! Ukuba unomdla kwiplagi kunye nenkonzo, unokunxibelelana noAdam kwiwebhusayithi yabo. Qiniseka ukukhankanya iposti yam yebhlog, sisebenzela ukuza nesaphulelo kubafundi bam. Sithanda ukongeza ezinye iiblogger zovavanyo (inkonzo inomda e-US okwangoku) eya kuthi inike inkonzo ukuzilolonga.
Inkonzo iyahambelana ngokupheleleyo nabo bonke abathwali, ifuna ukungena kabini kunye nokukhetha ukuphuma. Unokukhetha ukungena ngokuthumela imiyalezo ebhaliweyo IMartechLOG ukuba 71813. Unokukhetha ukuphuma ngokuthumela imiyalezo ebhaliweyo YEKA iMartechLOG ukuba 71813.
PHAWULA: Asinaxanduva lokuhlawulisa umntu ophetheyo ngenxa yemiyalezo ebhaliweyo okanye iindleko zedatha ezinxulumene nazo! Le beta ngokupheleleyo ngoku (bekufanele ukuba ubhalisile xa belumkisa zonke izimvo ze-SPAM!).
tags: I-sms yamagamaUkudityaniswa kwe-sms yokudibanisaIgama lefayile sms iplagi
Siqeshe igqwetha namhlanje
Ukungaphumeleli: IiLebhu zeMicrosoft Adcenter kunye neNET
Sep 6, 2008 ngo-9: 07 PM
Oku kujongeka kumangalisa kwishishini elincinci lendawo. Sijonge phambili ukuva ukuba samkelwa njani kwivenkile yekofu. Ngaba ekuqaleni wawucinga ukuba kuya kuba kuhle ukuba umlawuli alawule izimvo ngelixa ehambayo kodwa izimvo zakho zisiya kude.
Oktobha 3, 2008 ngo-9: 44 PM
Molo, oku kuvakala kunomdla! Ngaba kukho ikhonkco lokukhuphela naphi na?
Oktobha 4, 2008 ngo-3: 45 PM
Iplagi ifuna iakhawunti nge Imfono yokuxhuma. Ungaqhagamshelana nabo ukuba ungathanda ukwenza uvavanyo nathi, songeze ukhetho 'ngeposi' kwiplagi ngoku kutshanje! Inguqulelo 3.2 ikhutshiwe ngoku.
Meyi 3, 2016 kwi-9: 56 AM
Ngaba kunokwenzeka ukutshintsha ngokufanelekileyo ubhaliso lwe-WP / inkqubo yokubuyisela iphasiwedi ukusuka kwi-imeyile / iphasiwedi kwifowuni / kwi-OTP-password (ethunyelwe nge-sms)?
Meyi 3, 2016 kwi-10: 23 AM
Ndiqinisekile ukuba kukho iinkonzo ezibonelela oko. Ndiyazi ukuba kukho iplagi eqinisekisayo evela kuGoogle evumela usetyenziso kunye nekhowudi.